एनसेेलकाे टावर देखि राजधानीमा बम विस्फाेटको जिम्मा लिने विप्लवका नेता सरकारले समात्याे,अब के हुन्छ होला ? – www.agnijwala.com
एनसेेलकाे टावर देखि राजधानीमा बम विस्फाेटको जिम्मा लिने विप्लवका नेता सरकारले समात्याे,अब के हुन्छ होला ?
बिप्लब नेतृत्वकाे नेकपालाइ प्रतिवन्ध लगाएपछि सरकारले ठुलाे सफलता प्राप्त गरेकाे छ।शुक्रवार राती सरकारले साे पार्टीका बिप्लब पछिका तेस्रो ठुलाे नेता सहितकाे समुह समातेर सफलता हासिल गरेकाे सन्देश दिएकाे छ।गत साता काभ्रेमा भएकाे प्रहरी र विप्लव समुहविच भएकाे फायरिङमा संलग्न रहेकाे र साे फायरिङमा संलग्न हेमन्त प्रकाश ओली पक्राउ परेका छन।काभ्रेबाट काठमाण्डाैं आउदै गर्दा उनलाइ समातिएकाे हाे।नेता ओलीसंगै अन्य ८ जना नेता समेत पक्राउ परेका छन।प्रहरीले गत साता पनि काभ्रेमा पनि सर्च अभियान चलाएकाे थियाे।
विप्लव समुहका उपल्लाे स्तरका नेता ओली पक्राउ परेपछि यसले सरकारकाे मनाेवल बढाएकाे छ भने विप्लव समुहमा भने काेलाहल मच्चिएकाे छ। नख्खुमा भएकाे वम विस्फाेट देखि राजधानीमा भएका विस्फाेट समेतको जिम्मा लिएका ओलीकाे पक्राउ पछि उनलाइ सरकारले कुन स्तरकाे ब्यवहार गर्छ त्याे भने हेर्न वाकी छ । गत विहिवार मात्र सरकारले गाेला वारूद त्यागेर वार्तामा संलग्न हुन विप्लव समुहलाइ आह्वान गरेकाे बेलामा उपल्लाे स्तरकाे नेता समातिएपछि स्थिति बदलिएकाे छ। यस्तो स्थितिमा बिप्लब नेकपा कसरी जान्छ हेर्न बाकी छ।